WADA HADALO WAX WADA QABSI OO U BILAABMAY XISBIYADA WADANI & UCID + FAYSAL CALI WARAABE IYO CIRRO OO LA FILAYO IN LA ISU KEENO | Salaan Media
WADA HADALO WAX WADA QABSI OO U BILAABMAY XISBIYADA WADANI & UCID + FAYSAL CALI WARAABE IYO CIRRO OO LA FILAYO IN LA ISU KEENO
Wada hadalo muhiim ah ayaa u bilaabmay labada xisbi mucaarad ee Wadani iyo UCID oo aanay hore xaaladooda xidhiidh iyo wada
Hargeisa (SM) 17.07.2013 Wada hadalo muhiim ah ayaa u bilaabmay labada xisbi mucaarad ee Wadani iyo UCID oo aanay hore xaaladooda xidhiidh iyo wada shaqayneed u wanaagsanayn. Sidaas waxa Geeska Afrika u xaqiijiyay ilo xogogaala oo ku dhowdhow labada dhinac.
Wada hadaladan oo toddobadkan unkamay ayaa waxa ay labada dhinac u saareen guddi ka kooban min saddex xubnood, kuwaas oo soo diyaarin doona ajandaha wada hadalka labada xisbi mucaarad oo ay kala hoggaamiyaan Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) iyo Faysal Cali Waraabe oo wakhti dheer ahaa laba saaxiib oo isku dheer balse ay siyaasadu kala irdhaysay.
Sida ay ilahan xogogaalka ahi u sheegeen Geeska Afrika, waxa la filayaa in xubnahan guddiga ahi marka hore sameeyaan kulamo gogol xaadh ah oo la isugu soo dhawaynayo labada xisbi mucaarad oo inkastoo ay aragti ahaan isku dhowyihiin haddana aanay wada shaqayni ka dhaxayn. Kulamadaas guddiga ka dibna waxa la isu keeni doonaa labada guddoomiye Md. Faysal Cali Waraabe iyo Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), kuwaas oo iyaguna si rasmi ah u kala saxeexan doona heshiis rasmi ah oo u curta labadooda xisbi ee mucaaradka ah.
Awoodda xisbiyada mucaaradka ah iyo saamaynta ay ku leeyihiin xaaladda dalka ayaa hoos u dhacday maadaama oo ay tan iyo wixii doorashada ka dambeeyay labada xisbi hawada isu mariyaan cambaarayno iyo dhaliilo siyaasadeed, taasina waxay xukuumadda iyo xisbiga KULMIYE u saamaxday inay weydo dabar mucaarad ah. Hase yeeshe haddii ay wada hadaladani guulaystaan waxa la filayaa inay la soo baxaan awood mucaaradeed oo dheelitiran.
Geesta kale, waxa ay wada hada
ladani ku soo beegmayaan iyadoo ay dhawaan gole siyaasi ah sameeyeen siyaasiyiin mucaarad ah, kuwaas oo uu kamid yahay guddoomiyaha xisbiga UCID.